Lamina lava misy kapa
Miaraka amin'ny fisian'ny toetr'andro mangatsiaka, ny fanontaniana fototra momba ny karazana akanjo ivelany tokony harahina dia lasa lohahevitra. Ny safidin'ny mainty mainty sy ny fandresena dia safidy lava mainty lava miaraka amin'ny kapa. Modely maharitra toy izany dia tsy mahatalanjona fotsiny, manome ny mombamomba ny tompony ho mendri-kajika tsara, ary mahasalama tsara kokoa ny hafanana. Na dia manao akanjo kely miaraka amin'ny vokatra mitovy amin'izany aza ny zazavavy, dia tsy hahatsapa ny tsy fahasalamana.
Iza no manao akanjo lava amin'ny kapa?
Ny akanjo ivelany amin'ny modely dia tsy mety ho an'ny rehetra. Aleo hiresaka momba ny olona iray izay hitafy akanjo lava lavalava miaraka amin'ny kapa iray dia mijery lafy tsaran-javatra, manasongadina ny maha-vehivavy , ny hakanton'ilay tovovavy, ary ny fanaratsiana azy:
Ho maivana tokoa ny mipetraka eo amin'ny akanjo amin'ny vehivavy lava. Ity modely amin'ny akanjo ivelany ity dia natao manokana ho an'ny vehivavy lamaody toy izany;
Ireo tovovavy marefo dia tokony handao ilay akanjo lava lava eny amin'ny gorodona misy kapa. Ny akanjo toy izany dia mampiseho tarehimarika kely tsy mitovy. Ny zavatra tokana azonao amidy dia vokatra amin'ny lohalika, saingy amin'io tranga io dia mila maka booty avo be izay manitatra ny tongotra ianao;
Ny akanjo lava lava amin'ny kapa dia tsy tokony horaisina ho vehivavy bevohoka sy feno vehivavy. Ny oha-pitenenana toy izany indray dia hisarika ny saina ho amin'ny tsy fahatanterahan'ilay sary.
Nahoana no akanjo lava lava?
Ny palitao toy izany dia afaka manome ny endriky ny sary, saingy tsy tokony hohadinointsika fa ny fiakanjoana ivelany sy ny akanjo tsy mety dia hitodika any ivelany. Ireto misy soso-kevitra vitsivitsy momba ny fomba fanaovana ny akanjon'ny vehivavy lava amin'ny kapa. Ny akanjo toy izany dia mety tsara:
leggings ary kofehy;
akanjo maodely samihafa;
Ho an'ny accessories, miaraka amin'ny ririnina ririnina lava lava amin'ny kapa iray dia mety hampifandimbiasina karazana kitapo isan-karazany: vokatra amin'ny endriky ny unisex, kitapo voalohany, valopy.
Akanjo lava misy rongony
Panties ho an'ny vehivavy bevohoka
Toeram-pandihizan'ny spaatin'ny dobo
Toe-damba miaraka amin'ny tandroka manify
Ireo akanjon'ny hoditr'olon-kiran'ny vehivavy
Akanjo am-patana - 40 sary amin'ny akanjo tsara tarehy indrindra amin'ny akanjo
Fangatahana asa ho an'ny vehivavy matavy
Ohatrinona ny mahandro karaoke?
Cayley Cuoco mikasa ny hanambady?
Nahoana ianao no manonofy momba ny bobongolo?
Ny aretina Sheyerman-Mau - ny antony sy ny fitsaboana ny kyphose tanora
Asidra borika amin'ny sofin'ny zaza
Saripika ho an'ny efitranon'ny ankizy ho an'ny ankizilahy
Inona no nofinofin'ny zavona?
Hevitra ho an'ny manicure shellac
Sambany teo amin'ny enim-bolana, i Ariana Grande dia niseho ampahibemaso niaraka tamin'ny sipany Miller
Ny famotopotorana ny famonoana zaza Brad Pitt dia vita
19 fialantsasatry ny adala
Poses ho an'ny sary fampakaram-bady sary
Bala saka amin'ny tanany
Antikoly ao an-trano
Ny masajo gynecological
Akanjo fialantsasatra amin'ny ririnina - amin'ny inona no tokony harahina sy ny fomba hikarakarana ny akanjo volon'ondry amin'ny ririnina?